Izeluleko Ezingu-10 Zobuhle Bokuzenzela Zesikhumba Esikhanyayo - Isikhumba
Izeluleko Ezingu-10 Zobuhle Bokuzenzela Zesikhumba Esikhanyayo
Umoya wasebusika uvame ukukuphuca isikhumba sakho esikhazimulayo, kukwenze ufune ukubekelela ama-moisturisers amaningi nangaphezulu. Kepha liyini iphuzu lokutshala imali emikhiqizweni yokunakekelwa kwesikhumba ebiza izinkulungwane zamarandi lapho izithako ezingcono kakhulu zokuthola isikhumba esikhanyayo zonke zitholakala ku-pantry yakho? Ngisho nangaphandle kobusika, isikhumba esikhanyayo sinzima ukufeza ngenxa yezinkinga eziningana, kusuka ekubeni buthuntu nokoma kuya ezinduna nasemqubeni.
Kodwa-ke, nazi izixazululo eziyi-10 ezilula zokwenziwa namathiphu angakusiza ukufeza isikhumba esikhanyayo ekhaya . Zonke lezi zinto kufanele zitholakale kalula kuwe, futhi ukusetshenziswa kwazo nokusetshenziswa nakho kulula kanjalo. Bheka lokhu ngaphandle kwesikhumba esikhanyayo.
Isine. I-Rose Water
7. I-orange ikhasi
8. Uwoyela Kakhukhunathi
ishumi nanye. Imibuzo Evame Ukubuzwa Mayelana Nesikhumba Esikhanyayo
Lesi sinongo sifana negolide, unikezwe izinzuzo ezikugcinele zona. Okokuqala, i-turmeric icebile ezindaweni ezilwa namagciwane kanye nama-antioxidants. Lezi yizinto ezidingekayo ukufeza isikhumba esikhanyayo, ngokusho kweFarm Easy. Ngokwengeziwe, i-turmeric iqukethe i-curcumin, i-ejenti elwa nokuvuvukala engakusiza ukuqeda ukukhukhumala nezinduna. I-Turmeric nayo ingasiza ekunqandeni isikhumba esimnyama futhi yenze ukuthi ibukeke ivuselelwe, njengombiko ngamunye.
Ithiphu yepro: Ngenkathi ukuxuba isipuni se-turmeric obisini njengesiphuzo kungasiza ekuqiniseni ukuzivikela komzimba wakho kanye nempilo yangaphakathi, ukuyisebenzisa njengephakethe lobuso kungasiza ukuvikela impilo yesikhumba sakho . Hlanganisa isipuni se-turmeric nofulawa we-chickpea nobisi lwephakethe lobuso. Noma hlanganisa i-turmeric ebiza isipuni nesipuni soju nezipuni ezimbili zobisi ukuze kukhanye ngokukhanyayo.
Ngokuvumelana ne ZImbaNe.in , ukukhipha isikhumba sakho esikhunjeni kuphakathi kwezinyathelo zokuqala umuntu okudingeka azithathe ekufinyeleleni isikhumba esikhanyayo. I-Besan, noma ufulawa we-chickpea, usebenza njenge exfoliator enkulu yemvelo lokho kusiza ukuqeda amaseli afile. Lokhu kusho ukuthi kuzosebenza ungqimba olusha lwesikhumba sakho, okushiya ubukeka ukhazimula. Indlela engcono yokusebenzisa i-besan ukuyifaka kumaskhi owenziwe kalula.
Ithiphu ye-Pro: Ungaba nezinkumbulo ezimnandi zokusebenzisa ukuhlanganiswa kwe-besan esikhundleni sensipho usengumntwana. Ngakho-ke phinda ubuyele kuleso sifiso bese udala unamathisela usebenzisa amathisipuni amabili we-besan nesipuni esisodwa sikakhilimu (malai), bese usisebenzisa njengesifihla-buso sobuso. Lokhu, njengoba wazi, kungasetshenziswa kuwo wonke umzimba.
Abantu basebenzise i-aloe vera izinkulungwane zeminyaka ukwelapha nokuthambisa isikhumba. Kutholakala kumakhambi amaningi aphatha izingqinamba zesikhumba zazo zonke izinhlobo. It iqukethe amavithamini nama-antioxidants angagcini ekunikezeni isikhumba esikhanyayo kepha futhi asiza ukuvimbela izinduna nemibimbi, agcine isikhumba sinamanzi futhi asenze ngcono. Eqinisweni, uma kwenzeka uthola i-sunburnt, alukho unyango olungcono kunesicelo se-aloe vera.
Ithiphu ye-Pro: I-Aloe vera wuhlobo olulodwa lwesitshalo esenziwe ngobumba esingakhula kalula noma kuphi - kumthamo wakho noma ewindini lakho. Ungayisebenzisa ngokumane usike iqabunga livuleke, ukhiphe i-gel yalo bese uligcoba ebusweni bakho. Yishiye imizuzu engu-15, nawe’Kabusha kweyakho indlela eyakukhanya nesikhumba esiqinisiwe. Ungayisebenzisa kakhulu izifihla ubuso zobuso futhi.
Sonke siyawazi umnyombo amathathu izinyathelo zesikhumba : ukuhlanza, ukwenza i-toning nokuthambisa. I-Toning isiza ukususa imikhondo yokungcola nokungcola okushiywe ebusweni bakho ngemuva kokugeza. Uma ungumuntu ofuna ukuyeka ukusebenzisa amakhemikhali, rose amanzi enza njengemvelo isikhumba toner. Ayinuki nje kuphela, ishiya isikhumba sakho sizizwa siqabulekile.
Ithiphu yepro: Gcwalisa ibhodlela elincane lokufafaza ngamanzi e-rose. Yithwale uzungeze esikhwameni sakho noma phakathi nohambo olude lokuhamba uye e-spritz ebusweni bakho. Uzozizwa uvuselelwe ngokushesha.
Le potion yegolide ilungele impilo yakho uma ithathwa ngaphakathi nangaphandle. Uju lusebenza njengesithambisi esihle kakhulu. Inezinto eziningi ezilwa namagciwane ezingagcina izifo zithambile futhi ukunciphisa izibazi nezinduna, zikunikeze ibala elingenabala. Ibuye ibe nezindawo zokukhipha ibala ezisiza ukuqothula umbala futhi zingakushiya nesikhumba esikhanyayo.
Ithiphu yepro: Uma izindawo ezimnyama zimile phakathi kwakho nesikhumba esikhanyayo, zama le maski yobuso: Thatha isipuni esisodwa se-aloe vera, uju kanye ijusi kalamula . Faka isicelo esikhumbeni sakho, ushiye imizuzu eyi-10, bese ugeza ngamanzi afudumele. Ukusebenzisa lokhu ngezikhathi ezithile kungakunika imiphumela engakholeki.
Ukwatapheya umnandi ngazo zonke izindlela. Kodwa-ke, bewazi ukuthi i-avocado inezinzuzo ezinkulu zesikhumba futhi? Isithelo sinothile ngama-antioxidants futhi siqukethe izinto ezilwa nokuvuvukala. Kungasiza ngezinkinga eziningana ze-derma njengesikhumba esomile, isikhumba esonakele, kanye nesikhumba esiqhekekile, phakathi kwabanye.
Ithiphu yepro: Thola isikhumba esikhanyayo ngemaski elula futhi elula eyenziwe ekhaya: sika i-avocado ibe yizicucu bese uyifaka ngemfoloko. Faka isipuni esisodwa samafutha kakwatapheya, uhlanganise kahle, bese ufaka isikhumba esomile. Geza ngamanzi afudumele ngemuva kwemizuzu engu-15 ukuze uthole ukukhanya okune-hydrated.
Amawolintshi angumthombo ocebile we uvithamini C , esiza kakhulu ngokukhipha ubuthi emzimbeni. Ukusetshenziswa njalo kwamawolintshi njengesithelo noma ngohlobo lwejusi kungakusiza ukuthi ususe ubuthi uphinde uvuselele umzimba wakho. Kodwa-ke, uma ufuna ukwelashwa okuqondisiwe, ungasebenzisa ikhasi le-orange ngezindlela ezahlukahlukene. Okokuqala, kuvimbela ukukhula kwe-melanin, nakho okungakunika isikhumba esikhanyayo.
Ithiphu yepro: Gaya ikhasi le-orange elilodwa nesipuni esisodwa samanzi ama-rose, bese ufaka unamathisele esikhunjeni esimanzi. Shiya imizuzu engu-10 bese ugeza. Qiniseka ukuthi ungayivumeli ihlangane ngamehlo akho.
Kusukela ezinweleni kuye ozwaneni, uma kunezinkinga zangaphandle, uwoyela kakhukhunathi ungakusiza ngazo! Ukukhipha ngokuphelele isikhumba sakho bese usishiya kanjalo kungaholela esikhunjeni esomile, ama-pores akhulisiwe nezinye izindaba eziningi zesikhumba. Kubaluleke kakhulu futhi kuwe ukuthambisa ngemuva kokukhipha amafutha, futhi uwoyela kakhukhunathi waziwa ngezindawo zawo zokuthambisa. Ngokuya nge-Pharm Easy, iqukethe ama-antioxidants nama-fatty acids futhi inganciphisa ukuvuvukala nezinduna. Ingasebenza futhi njengesihlanganisi esihle kakhulu sokuhlanza, nesokuvikela ilanga. Faka konke lokhu ndawonye, ​​futhi unayo isikhumba esikhanyayo esinempilo .
Ithiphu ye-Pro: Uma kwenzeka uzizwa sengathi i-moisturizer yakho ayifaki i-hydrate ngokwanele, ungalilahli ibhodlela lonke. Esikhundleni salokho, njalo emva kokugeza, hlanganisa amaconsi ambalwa kawoyela nawo wonke amaphampu wesithambisi sakho bese uwagcobisa. Isikhumba sakho sizosala nokukhanya okuhle okunempilo.
Uma sicabanga ngekhukhamba nokunakekelwa kwesikhumba, ingqondo yethu iqale igxume ukubeka izingcezwana emehlweni ngesikhathi sobuso. Isizathu sokuthi lokhu kwenziwe hhayi nje ngenxa yezindawo zokupholisa le mifino enazo futhi zinezinga le-pH elilinganayo nesikhumba sethu, yingakho kusiza ukugcwalisa ungqimba lwesikhumba oluvikelayo, ukususa ubumnyama noma isikhumba esifiphele, futhi kunciphise nokuvuvukala noma ukukhukhumeza.
Ithiphu ye-Pro: Thatha ikhukhamba elilodwa nezipuni ezimbili ukuya kwezintathu zeyogathi. Gaya ikhukhamba kuqala unamathisele, bese uxuba kahle iyogathi. Faka le nto ebusweni bakho nasentanyeni, bese uyishiya imizuzu eyi-10. Hlanza ngamanzi abandayo. Kuhle njengokuthola ukwelashwa okubizayo okwenziwa esalon, kodwa kungenawo amakhemikhali.
Ngokuhamba kwesikhathi, kungenzeka ukuthi ubone okuthunyelwe okuningi ezinkundleni zokuxhumana ezikhangisayo izihlahla zekhofi . Lokhu kungenxa yokuthi ikhofi lithola idumela njengesithako samakhambi esikhumba. I-elixir yakho yamandla asekuseni icebile kakhulu kuma-antioxidants, aqukethe ama-phenols asiza ukulwa nezinto zangaphandle ezingalimaza isikhumba sakho.
Ithiphu ye-Pro: Hlanganisa isipuni esisodwa sekhofi nesipuni esisodwa soju, bese ufaka ebusweni nasentanyeni. Ngenkathi ikhofi likhipha, uju luyathambisa, ngaleyo ndlela kukusize ufeze isikhumba esikhanyayo'futhiobefuna njalo. Lesi buso singasetshenziswa kuwo wonke umzimba.
Imibuzo Evame Ukubuzwa Mayelana Nesikhumba Esikhanyayo
Q Yini imfihlo yesikhumba esikhanyayo?
TO. Amagama amabili: Khipha futhi uthambise. Into eyisisekelo okufanele uyiqonde ngesikhumba esikhanyayo ukuthi, ngokuhamba kwesikhathi, ungqimba oluphezulu lwesikhumba lwethu luzolimala ngenxa yezizathu eziningana, zombili zangaphandle nezangaphakathi. Ukuphela kwendlela yokuba nesikhumba esikhanyayo futhi esikhanyayo ukugeza amaseli afile kusuka kungqimba olungaphezulu nge-exfoliator noma nge-scrub bese uthambisa isikhumba sakho ukuze uvale izimbotshana zakho, unike isikhumba sakho amanzi, bese wenza ungqimba oluvikelayo kuma-radicals wamahhala. Ukwenza lokhu njengomkhuba wansuku zonke ngeke kukunikeze isikhumba esikhanyayo kuphela kepha futhi kuzokuvikela ezweni lezinkinga zesikhumba.
Q Umuntu angenza kanjani ukuthi isikhumba sakhe sikhanye nsuku zonke?
TO. Njengoba kushiwo ngenhla, ukukhipha i-exfoliating kanye ne-moisturizing kubalulekile. Kodwa-ke, usengabhekana nezinkinga eziningi zesikhumba uma ungazinakekeli futhi ulandela indlela yokuphila engenampilo. Ezinye zezinto ezibalulekile okufanele uzikhumbule ukuze uzuze isikhumba esikhanyayo ukuthi udinga ukuphuza amanzi amaningi, kuze kufike ekudleni kwakho imifino, uvivinye umzimba nsuku zonke. futhi unciphise ukudla okuthosiwe nokubhema.
amagama okudla kwama-Chinese nezithombe
izinwele zezinwele zobuso obu-oval nezinwele ezi-wavy
ukudla komunwe kwezingane
eziqongweni ukugqoka nge jeggings
ukusakazwa bukhoma kwama-olympic online